Cruising New Caledonia: Tsy fampandrosoana mahagaga
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Cruising New Caledonia: Tsy fampandrosoana mahagaga
Any New Caledonia eo anelanelan'ny 2013 sy 2016, ny tahan'ny sambo fitsangantsanganana dia nitombo 32%. Tamin'ny 2016, nisy mpandeha 509,463 mahery tao anaty sambo ary 235 ny sambo fitsangantsanganana izay nitombo 10.3% noho ny tamin'ny 2015. Tamin'ny fitambarany, nisy fijanonana 504, nisaraka tamin'i Noumea (195), Isle of Pines (109), Lifou (108) , Maré (89) ary nosy kely kokoa.
Miaraka amin'ny toerana mety misy azy eo anelanelan'i Aostralia sy Nouvelle Zélande, tsy mahagaga raha nitombo 300% ny isan'ireo mpandeha fitsangantsanganana an-tsambo any New Caledonia tato anatin'ny folo taona.
New Caledonia dia faritany frantsay misy nosy am-polony any Pasifika atsimo. Fantatra amin'ny morontsiraka misy ny felatanany sy ny renirano manankarena amin'ny fiainana an-dranomasina, izay, amin'ny 24,000-kilometres-km, dia iray amin'ireo lehibe indrindra manerantany. Haran-dranomasina sakana lehibe no manodidina ny nosy lehibe, Grand Terre, toerana fitsidihana scuba lehibe. Nouméa renivohitra dia trano fonenan'ireo trano fisakafoanana mitaona frantsay sy fivarotana bizina manankarena mivarotra lamaody any Paris.
Teo anelanelan'ny 2013 sy 2016, ny tahan'ny sambo fitsangantsanganana dia nitombo 32%. Tamin'ny 2016, nisy mpandeha 509,463 mahery tao anaty sambo ary 235 ny sambo fitsangantsanganana izay nitombo 10.3% noho ny tamin'ny 2015. Tamin'ny fitambarany, nisy fijanonana 504, nisaraka tamin'i Noumea (195), Isle of Pines (109), Lifou (108) , Maré (89) ary nosy kely (3).
Ny nosy dia misy fisongadinana maro be ka tsy hadino ny seranan-tsambo tsirairay. Ny sisin-dranomasina lehibe indrindra eto an-tany - voasoratra ao amin'ny World Heritage List tamin'ny taona 2008 - sy ny morontsiraka mahafinaritra, ity tany mifanohitra sy miaina biodiversité endemika tsy manam-paharoa ity dia manolotra toerana sy kolontsaina ary hetsika miavaka miaraka amina toetr'andro tropikaly antonony, izay manodidina ny 20 ° C hatramin'ny 30 ° C. Raha i Noumea dia manolotra maoderina an-tanàn-dehibe miaraka amina fikitihan'ny French Riviera refinement, Lifou sy Maré (Nosy Loyalty) dia milentika tanteraka amin'ny fomba fiainana nentim-paharazana Kanak ho an'ireo mpandeha fitsangantsanganana ary ny Nosy Isika Pines dia miavaka amin'ny hakanton'ny fahitana voajanahary, a paradisa marina ety an-tany. Fotoana tsara ahafahana mahita faravodilanitra vaovao, miala voly, miaina tsiro ivelany, fitsangatsanganana ara-kolontsaina ary hetsika fialamboly amin'ny karazany rehetra.
New Caledonia dia manatsara hatrany ny fahaizany mandray ireo mpandeha fitsangantsanganana ary manamafy ny fiarovana ny seranana. Manomboka amin'ny 2017 ka hatramin'ny 2021, drafitra famatsiam-bola vaovao mitentina AUD 35 tapitrisa no hamela ny fanatsarana ny terminal ferry, ny wharfs Ferry ary ny fijanonan'i Isle of Pines, Lifou, Poum. Izy io dia hanampy amin'ny fitazonana fotodrafitrasa avo lenta sy fahaizana hanaraka ny fenitra takiana indrindra amin'ny fiarovana, fitaterana, fahatsiarovan-tena, fitandremana ary fisarihana ara-barotra. Ankoatr'izay, tamin'ny faran'ny taona 2016, nipoitra ihany koa ny paikady fampandrosoana ho an'ny mpizahatany eran'izao tontolo izao, izay hitohizan'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany ary hohamafisina mba hahatratrarana ny tanjona voafetran'ny mpandeha an-dranomasina 1,200,000 amin'ny 2025. Ny tsenan'ny fitsangantsanganana an-tsambo dia lasa laharam-pahamehana ho an'ny Fizahan-tany any New Caledonia izay mikendry ny hanatsara ny fotodrafitrasa mba ho vonona handray ireo mpandeha fitsangatsangana bebe kokoa amin'ny taona ho avy. Ny firenena iray manontolo - ao anatin'izany ny andrim-panjakana, ny mpandray anjara tsy miankina ary ny vondrom-bahoaka - dia nahatsapa fa nanjary zava-dehibe ho an'ny toekarena New-Caledonia ny sehatry ny fitsangantsanganana ary mivoatra amin'ny fanatsarana ny fahaizan'ny fizahan-tany hanomezana traikefa tsara indrindra ho an'ireo mpitsidika anay.
Farany nefa tsy kely indrindra, tamin'ny 28 desambra 2016, mpandeha sambo fitsangantsanganana efa ho 2,000 no voalohany no noraisina voalohany tany New Caledonia sy Noumea nandritra ny seranan-tsambo fiantsoana nataon'ny sambo fitsangantsanganana Costa Atlantica (natolotry ny CAISSA, iray amin'ireo fitsidihana sinoa lehibe mpandraharaha) miaraka am-piarahabana manokana karakarain'ny tompon'andraikitra andrim-panjakana sy ny indostrian'ny fizahantany eo an-toerana. Tsena vaovao hafa manana tanjaka mety hitombo!
Inona ny farany amin'ny Birao Afrikana fizahan-tany vaovao?